Avy amin’ny Vivo Energy : nahazo toeram-pandidiana zaza ny HJRA | NewsMada
Avy amin’ny Vivo Energy : nahazo toeram-pandidiana zaza ny HJRA
Nahazo toeram-pandidiana ho azy manokana ny sampana fandidiana zaza ao amin’ny HJRA vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa Vivo Energy. Ahitana efitrano maromaro ny fotodrafitrasa ahafahana mandidy, mikarakara sy miandry ny fifohazan’ny zaza avy niatrika fandidiana. Nampitaovana ny minisiteran’ny Fahasalamana. “Tsy voatery mivezivezy toy ny teo aloha amin’ny rihana maromaro intsony ny fandraisana an-tanana fa tontosa amin’ny toerana iray madio sy manaja ny fenitra ara-pahasalamana rehetra”, hoy ny tomponandraikitry ny sampana fandidiana ny zaza, ny dokotera Raherison Romain. Tsy voatery mijanona maharitra eny amin’ny hopitaly ny ankizy voadidy fa afaka mody ny andron’iny ihany aorian’ny fandidiana.
Matetika, miandry fotoana lava manaraka tetiandro vao azo didina ny ankizy iray raha tsy misy ny hamehana. Amin’izao fotoana izao, mitombo ny isan’ny zaza azo raisina an-tanana. Ny taona 2017, nahatratra 1 734 ny zaza nandalo fandidiana tao amin’ny HJRA. 1 008 tamin’ireo fandidiana vonjiaina avokoa.
“Olona miaina eny amin’ny fiarahamonina ny mpiasa ato amin’ny Vivo Energy ka vonona hatrany izahay hanohana ny sehatra tahaka izao ny mikarakara ny vahoaka sy ny mpiara-belona”, hoy ny tale jeneralin’ny orinasa Vivo Energy, Kader Maiga, nandritra ny fitokanana ny zava-bita teny Anosy ny alakamisy lasa teo.